Ogaden News Agency (ONA) – Hogaaminta Laba Kuuriya oo Kulan Lama Filaan Ah Yeeshay.
Hogaaminta Laba Kuuriya oo Kulan Lama Filaan Ah Yeeshay.
Posted by ONA Admin	/ May 27, 2018
Madaxda labada kuuriya ayaa shalay oo sabti ahayd kulan aan horey loo shaacinin ku yeeshay xuduuda u dhaxeysa labadaasi wadan.
Kim Jong-un iyo Moon Jae-in ayaa shir albaabada u xidhan yihiin ku yeeshay xaduuda dhinaca Kuuriyada Waqooyi, waana kulankii 2aad oo ay labada hogaamiye yeeshaan kadib kulankoodii taariikhiga ahaa ee 27-kii bishii lasoo dhaafay ee April.
Shirkan ayaa lagu soo beegay xili uu socdo dadaal lagu doonayo in lagu wadahadalsiiyo Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kulankaasi oo la filayey inuu dhaco 12ka June ayaa waxaa khamiistii sheegay inuu baaqday kulankaasi Trump.
Mas’uuliyiinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay hadalo kulul isu marinayey hawada kadib markii Maraykanka sheegay in ay doonayaan in Kuuriyada Waqooyi ay gebi ahaan ka tanaasusho hubkooda Nukliyeerka, arrintaasi oo ay Kuuriyada Waqooyi horey shuruud uga dhigtay in dhamaan dhinacyada is haya hubkooda nukliyeerka ka tanaasulaan oo burburiyaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay weli diyaar u tahay wadahadalka Maraykanka, balse waxaa muuqda in ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin natiijooyinka ay doonayaan in ay kasoo baxaan kulankaasi la qorsheeyey inuu dhaco bisha June.
Axada maanta ah ayaa lagu wadaa in labada Kuuriyada ay si wadajir ah usoo saaraan go’aanada kasoo baxay kulankii shalay dhexmaray hogaamiyayaasha labadaasi dal oo sheegay inay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan inuu joogsaday dagaalkii u dhaxeeyey labada dal tan iyo 1953dii, labada wadan ayaa xiligaasi wada saxiixday xabad-joojin balse aan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin heshiis rasmi ah.